Daredevil Captain America ပြည်တွင်းစစ်တွင်ပေါ်သင့်သလား။ - Netflix မူရင်း
Daredevil, Jessica Jones နှင့် Luke Cage တို့သည် Marvel Captain America ပြည်တွင်းစစ်တွင်ပေါ်ပေါက်သင့်သလော။
Netflix မှအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀: Mystic River သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါဝင်သည် အကောင်းဆုံး Netflix နှင့်ချမ်းအေးသည့်ရုပ်ရှင် ၅၀: E.T. အဆိုပါအပို - မြေပြင်
Captain America ပြည်တွင်းစစ်နှင့်အခြား Marvel ရုပ်ရှင်များတွင် Daredevil, Jessica Jones နှင့် Luke Cage တို့ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြသည်။
* ဖြစ်နိုင်သမျှအောက်မှာသတ္တုများပုံသွန်း spoilers ကိုယ့်အန္တရာယ်နဲ့ကိုယ်ဖတ်ပါ။ *
၏အောင်မြင်မှုပြီးနောက် အံ့’s ခြင်းရဲ့ Daredevil နှင့် ဂျက်စီကာဂျုံးစ် Daredevil နှင့် Jessica Jones တို့အသွင်သဏ္makingာန်တူသည်ဟုခန့်မှန်းမှုများနှင့်ကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေသည် ဗိုလ်ကြီးအမေရိက - ပြည်တွင်းစစ် နှင့်အခြား Marvel ရုပ်ရှင်။
အစီရင်ခံစာများအပေါ် အခြေခံ၍ Charlie Cox နှင့် Krysten Ritter တို့မပါဝင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည် ဗိုလ်ကြီးအမေရိက - ပြည်တွင်းစစ်၊ အရာ, 2016 မေလ6ပြသဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့် Netflix-Marvel ပရိတ်သတ်တွေအချို့မျက်ခုံးကြီးပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့သတ္တုများပုံသွန်းရှိခဲ့သည်!
ကနေအစီရင်ခံစာအရ ComingSoon.net အတွက်သွန်းလောင်းခဲ့သူ, Alfre Woodard အံ့’s ခြင်းရဲ့လုကာကေ့ , ၏သွန်းထဲမှာစာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် ဗိုလ်ကြီးအမေရိက - ပြည်တွင်းစစ်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင်ကြေညာချက်အွန်လိုင်း buzz ဖန်တီးနှင့်အရေးကြီးသောမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်:
Will Daredevil, Luke Cage နှင့် Jessica Jones တို့ပါ ၀ င်သည် ပြည်တွင်းစစ်?
ကောင်းပြီ, သွန်းစာရင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, ငါတို့သိသည် Netflix သူရဲကောင်းများကြီးမားတဲ့အံ့သြစရာရှိနေသော်လည်းပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအသွင်အပြင်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဲဒီအစားကျနော်တို့က Daredevil, Luke Cage နဲ့ Jessica Jones တို့မှာ ၀ င်ခွင့်ရလားဆိုတာဆွေးနွေးချင်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ် နှင့်အခြားအံ့ movies ခြင်းရုပ်ရှင်။
Daredevil နှင့်အခြား Netflix သူရဲကောင်းများပေါ်လာသင့်သည် Captain America: ပြည်တွင်းစစ်လား
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါ Daredevil ဒါမှမဟုတ် Netflix-Marvel သူရဲကောင်းတွေကိုအသွင်အပြင်တစ်ခုဖန်တီးစေချင်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ ပြည်တွင်းစစ်။ ငါဘာသာရပ်အပေါ်ပconflictိပက္ခဖြစ်တယ်။
တစ်ချက်မှာ MCU သည်မည်မျှချိတ်ဆက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ရုပ်ရှင်၊ တီဗီနှင့်အခြား Marvel ဇာတ်လမ်းများအကြားတွင်ဖြတ်သန်းသွားသောအပိုအားထုတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွေကိုမတူကွဲပြားတဲ့ကမ္ဘာတွေမှာဖြစ်ခွင့်ပြုဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Marvel ဟာပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုကြက်ဥများ၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ခေါင်းတလားတွေ၊ Marvel ဘုံမှာရှိတဲ့အခြားအလုပ်တွေအတွက် ဦး ထုပ်အကြံဥာဏ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်အောင်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါ Marvel ဂျက်စီကာဂျုံးစ်, Daredevil, လုကာကေ့နှင့် Iron Fist တူသောသူတို့ရဲ့ Netflix ကဇာတ်ကောင်နှင့်အတူငါးမန်းခုန်ချင်ကြဘူး။ Daredevil နဲ့ Jessica Jones တို့အတွက်သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ gritty, street-level world ကိုငါကြိုက်တယ်။ လိုပဲငရဲရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာအလုံအလောက်ပြproblemsနာတွေအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်။ Daredevil နှင့် Jessica Jones တို့သည်စူပါဟီးရိုးကြီးများအကြားရန်ငြိုးကိုတိတိကျကျမမီနိုင်ပါ။
ရာသီ4Jane သတို့သမီးကညာ Netflix
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမမှန်ကန်တဲ့အဖြေနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံပါတယ်။ ပရိသတ်တွေဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။ အပေါ်ကိုတက်ထိမှန် တွစ်တာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ဤခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးမှုတစ်ခုရရှိရန်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်!
နှင့်အညီ, သင်အံ့သြဖွယ်ရဲ့လုကာ Cage ကိုဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း Netflix ကိုထိမှန်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် Netflix ကအပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့ပိုပြီးကြီးစွာသောရှိုးပွဲများအတွက် Netflix ကအပေါ် 50 အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေး!
Netflix ကနေ remove အားပြပွဲစာရင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရှု
ဘယ်လောက်ရာသီ outlander အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်
တဦးတည်းသစ်ပင်တောင်ကုန်း Netflix ထွက်ခွာနေသည်